Uluhlu 9.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-9
Itheyibhile ye-9 yitafile eya kuthi isixelele iziphumo zokongeza inani elifanayo kali-9. Le theyibhile ichaza nje ukuba ukuphindaphinda 2 × 9 = 18 kuyafana nokongeza inani 9 amaxesha 2, umzekelo: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18 = XNUMX
Masibone umzekelo: ukuba sineebhegi ezili-9 kwaye kwezi ngxowa nganye sibeka iikati ezi-3, ngoko ke siya kuba ne-9 × 3 = 27, okanye yintoni enye, ingangamaxesha ali-9.
Uya kuyisebenzisa le tafile ebomini bakho nanini na ufuna sazi isiphumo samaxesha ama-9 ngesixa, ungayisebenzisa ukufumana ukuba zingakanani iindleko zokutya kusapho ukuba kukho izitya ezili-9 kwaye isitya ngasinye sinexabiso elifanayo.
Iimpawu zetheyibhile e-9 :
• Le tafile isinika iziphumo zalo naliphi na inani eliphindaphindwe ka-9.
• Le tafile isinika nje isiphumo sokongeza amaxesha ali-9 ngobungakanani obufanayo, ukuze 5 × 9 = 45
• Itheyibhile ka-9 iyakusinceda kubomi bethu bemihla ngemihla ukuba sazi izinto ezininzi, umzekelo, siya kuyisebenzisa ukwazi ukuba zingaphi iisuti ezilinganayo eziyi-9 ezongezelelweyo ukuba isuti nganye inexabiso elifanayo.
• Ukuba sineebhegi ezili-9 ezineelekese ezi-2 inye, ngoko ke siya kuba ne-9 × 2 = 18 iilekese.
• Ukuba sineebhasikithi ezili-9 ezinee-apile ezi-5 kwibhaskithi nganye, ngoko ke sino-5 × 9 = ama-apile angama-45 xa zizonke.
• Ukuba sineebhasikithi ezili-9 ezineebhanana ezisi-7 kwinto nganye, siyakuphinda-phinda ngo-9 × 7 = 63